Loza an-dranomasina Avotra ihany ilay mpanarato vaky lakana
Araka ny loharanom-baovao azo avy any Toamasina, tsy misy ahiana ny ain’ilay raim-pianakaviana izay tsy nahatsiaro tena tanteraka raha tratran’ny fahavakisan’ny lakana teny anivon-dranomasina.
Efa manezaka araka izay tratrany hatrany moa ireo mpitsabo. Miendrika fahagagana ihany ity tranga ity. Efa teny anivon’ny ranomasina no nidi-drano ny lakana nentin’ity rangahy mpanarato ity. Ny SPAT na ny mpamonjy voina avy ao amin’ny seranan-tsabon’i Toamasina no nandray an-tanana ny fanavotana azy io. Efa tsy nahatsiaro tena ilay mpanarato, ny fiara fitondrana mararin’ny
seranan-tsabon’ny renivohitra faritra Atsinanana no nitondrana azy nihazo ny hopitaliben’i Toamasina. Marihina moa fa na mahay rano aza ireo mpanarato, reraka ihany noho ny onjan-drano izay lavitra sady mahery vaika tokoa amin’izao vanim-potoanan’ny rotsak’orana sy ny rivodoza izao. Fa saingy noho ny asa fivelomana sy ny famelomana vady aman-janaka dia mandeha tsy satry ireo raim-pianakaviana mpanjono na mpanarato. Tsy mahagaga raha tehaka no handraisan’ireo vady aman-janany ny raim-pianakaviana mpanarato amin’ny tolakandro, rehefa migadona soamantsara eny an- tanety izy ireo miaraka amin’ny hazandrano izay azony. Tsy vitsy ireo asa mihatra aman’aina amin’ireo ray na renim-pianakaviana.